Experts – My Life Magazine
के बोल्ने, कति बोल्ने ?
ExpertsDecember 24, 2019
– बबिता बस्नेत संस्कृतमा एउटा श्लोक छ,मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायाँ वस्त्रवेष्टित ।तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किञ्चिन्न भाषते । यसको अर्थ हुन्छ, ‘सुरुमा त राम्रा कपडा लगाएको मूर्ख पनि पण्डितहरूको सभामा शोभायमान हुन्छ । तर, त्यतिबेलासम्म…
धुवा रहित सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र जनस्वास्थ्य
ExpertsNovember 1, 2018
डा. शिशिर पोखरेल धुवारहित सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गुटका, पानको रुपमा नेपालमा गर्ने गरिएको पाइन्छ। सुपारी र विभिन्न क्यान्सर कारक रसायनको मिश्रण गरी बनाइने यो पदार्थ नेपाली बजारमा बिभिन्न नामले बिक्री हुने गरेको छ। नेपाल, भारत,…
बलात्कार हुनबाट कसरी जोगिने ?
ExpertsJuly 31, 2018
ददि सापकोटा महिलाहरु साँझमा बाहिर एक्लै निस्कन डराउँछन् । एकलासको बाटो हिड्नु परे दशपटक सोच्छन् । बस्ती नभएको वा सुनसान ठाउँ पार गर्नुपर्दा महिलाले दाजुभाइ वा कोही भरपर्नेको साथ खोज्छन । पुरा बिश्वास नभएका पुरुषसँग…
नेपालमा नर्सिङ पेशा र यसका चुनौतीहरू
ExpertsJune 5, 2018
नर्सिङ भनेको त्यो सेवा हो, जसले व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, स्याहारसुसार गर्ने, रोगबाट बचाउने र पुनस्र्थापना गर्ने कार्य गर्दछ। यस्तो कार्य गर्नका लागि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू नर्स हुन्। जसले सेतो…
किन बढ्दै छ सम्बन्ध विच्छेद ?
ExpertsApril 29, 2018
[caption id="attachment_1480" align="alignnone" width="181"] कविता शर्मा[/caption] झापा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता दिनहुँ बढिरहेको रहेको तथ्यांक संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको देखिन्छ । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरु दिनहु जसो संचारमा आईरहेका हुन्छन् ।…
संस्कृतिमै सिमित कोचकला
ExpertsFebruary 21, 2018
प्राज्ञ. पवबन कुमार राजवंशी विश्वका अनेक सभ्यताहरुको अध्यययनले के देखाउ“छ भने आदिम युग देखि नै मानिसहरुले कुनै न कुनै रुपमा कलाको सृजना गरेको देखिन्छ। आजभन्दा हजारौँ वर्ष देखि नै मानिस सौन्दर्यको उपासक थियो र आफ्नो…
हर्मोनलाई यौनमा स्खलित गर्ने कि कलामा ? डा.…
ExpertsDecember 27, 2017
यौन प्राकृतिक आवश्यक्ता हो, जो महिला र पुरुष दुबैमा हुन्छ । जब यौन चाहाना जाग्छ, महिलाहरुमा कजेस्टोरेन र पुरुषहरुमा टेस्टोटेरेन नामक हर्मोन स्राव हुन्छ । यी दुबै हर्मोनले यौनमा उत्तेजना ल्याउँछ । साथसाथै अर्को…
ExpertsDecember 26, 2017
समा थापा बितेका १० वर्षमा मैले अनगिन्ती समाचार सुनाएँ। दर्शकले मलाई हेरिरहेका बेला म टेलिप्रम्प्टरमा हेरिरहेकी हुन्थेँ। मलाई नियाल्ने प्रोड्युसरचाहिँ मास्टर कन्ट्रोल रुममा हुन्थे। यस्तो त्रिकोणात्मक प्रयत्नमा खबरका कारोबार गरिरहेँ। महत्वपूर्ण कुरालाई सुरुमै भन्न हामी…
दुर्गा कार्की सरकारी स्कूलहरूमा (विशेष गरी गाउँका) छात्रहरूको ट्वाइलेटभित्र छिर्नुभएको छ? गाउँ उक्लने सिँढीहरूमा चकले लेखिएका कुराहरू पढ्नुभएको छ? वा कुनै बेला आफैँले लेख्नुभएको छ? कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ, ती कसले लेख्छन्? त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण,…
Social Darwinism Emerges and Is Used to Justify…
ExpertsDecember 7, 2017
Overview Social Darwinism wasasociological theory popular in late nineteenth-century Europe and the United States. It merged Charles Darwin's theory of natural selection and Herbert Spencer's sociological theories to justify imperialism, racism, and laissez-faire…